Ka macruufka Qalabka Transfering Data in HTC Phones
Maanta Mid ka mid ah soo saarayaasha smartphone ugu filayay waa HTC. Sida ku cad warbixinta CNET ah, model flagship HTC Mid ka mid ah M8 barbaro 23% ka mid ah dadka isticmaala iPhone bil gudaheed tan iyo markii ay sii daayo. Iyadoo saarayaasha smartphone sii daayo qalabka cusub sannad kasta, bareeg markii ay u wareegaan phone cusub uu noqonayaa gaaban. Fikradda ah in lagu casriyeeyo casriga cusub u muuqan kartaa xiiso leh, ilaa aad ka fikirayso wareejinta xogta ka dukaamada jir in kale.
Sida macruufka ah qalab user hadda, ay u badan tahay waa la idin soo food saartay dhibaato ka mid ah in aad telefoon cusub HTC wareejinta xogta aad tan iyo markii ay yihiin dhufto ee mobile gebi ahaanba ku tacaluqda. Dadka intooda badan qaatay saacado dheeraad ah ee photos, iyo videos badbaadinta ee kombiyuutarka, oo waxaad ka samaysaa kala iibsiga ah ka computer qalabka cusub ee ay HTC. Qaar ka mid ah files ayaa sidoo kale la kulmay in lagu wareejiyay si guul ah ma, labada tayo xun leh, ama laga waayi karo files qaar ka mid ah inta ay socoto. Laga soo bilaabo videos iyo sawiro aad qabsaday, in boqolaal music aad soo bixi, si kumanaanka ah ee fariimaha qoraalka aad u dirtay, oo helay, aad casriga jir waa xabadka oo maal, iyo xogta si aan loogu waxyeelleeyey.
Xal Easy: 1 click in xogta ka iPhone wareejiyo HTC
Maanta, uma baahnid inaad si ay u gudbiyaan xogta aad u yar yar. Iyadoo click hal Wondershare MobileTrans, kuu soo gudbin karaa wax kasta oo faylasha aad rabto in aad u haajiraan, oo aad marna la kulmi doonaan khatar kasta ama khasaaro tayo leh inta aad kala iibsiga. Waa 100% ammaan ah, oo tayo leh oo ay si sax ah waa isku mid sida mid ka mid ah asalka ah. Iskusoo wada duuboo, software tani waa si nabad ah oo fudud si ay u isticmaalaan.
MobileTrans Waxaa si gaar ah loogu talagalay dhammaan dadka isticmaala aaladaha kala duwan iyo shabakadaha, oo ay ku jiraan HTC, Samsung, Sony, ZTE, Apple, Huawei, Nokia, LG, Google, iyo Motorola. Haajiraan xog ku saabsan telefoonada ee shirkado kala duwan. Kumanaan ka mid ah qalabka ku saleysan macruufka, Android, iyo Symbian waxaa taageera software this. Iyada oo aan wax dadaal ah, software tani waa awood in aad nuqulka iyo sawirada, xiriirada, farriimo music, videos, iyo SMS text oo dhan wareejiyo.
• Soo Celinta ka hayaan - Hadda waxaad ku hayn kartaa gurmad file in aad telefoon cusub oo ka Lugood, Blackberry, iyo Kies. Marka aad files gurmad, ma jirto baahi ah in la walwalo macluumaadka shakhsiyeed ama khasaaraha xogta tan iyo markii barnaamijkaan waa 100% ammaan ah.
• Xogta kaabta Phone - Haddii aad rabto in aad qaar ku badbaadiyo xog muhiim ah, waa suurtowdaa gurmad iyaga Mac OS X ama Windows PC.
• masixi macluumaadka telefoonka jir - Waxaad hadda marna masixi karin macluumaadka telefoonka jir si aad u nadiifiso macluumaadka shakhsiga ah.
• Si buuxda u la jaan qaada macruufka 9
Isticmaalka Wondershare MobileTrans in ay xogta ka iPhone ah wareejiyo HTC ah
Iyada oo taageero ah MobileTrans ah, transfering dhammaan faylasha muhiim ah, oo ay ku jiraan video, xiriirada, fariimaha SMS, abuse wac, sawiro, muusig iyo playlists dhexeeya telefoonada, noqday fudud oo degdeg badan. Xitaa in aad wareejin kartaa jadwalka taariikhda shakhsi ahaaneed si fudud!
Tallaabada 1. Download MobileTrans si aad u computer ka dibna ay u maamulaan.
Ka hor inta aanay is bilaabay, waa in aad kala soo bixi ku MobileTrans software on your computer. Marka si guul ah lagala soo bixi, waxa loo soo dajiyo. Marka lagu rakibay, waxaa lagu daahfuri. Marka aad dhamaysid ku saabsan habka this, waxaad arki doontaa suuqa kala hoose.
Fiiro gaar ah: Hubi haddii aad ku rakibtay Lugood on your computer ka hor, haddii aan markaas gashato, ama haddii kale aan aad ku dhameysan doona waxa aad bilowday. Haddii in mudo ah waxa kaliya ee aad leedahay iPhone, laakiin aad soo celin karaa qalab HTC aad ka dib, dib xogta ugu horeysay ee iPhone in kombiyuutarka.
Step2: Connect Laba ka mid ah Qalabka Your si aad Computer
Ka dib markii ay soo degsado software-ka, waxa aad ka arki doonaa laba qaybood oo waaweyn ee qalabka. Waxaad la isku xira doonaa labada qalabka. Iyada oo fiilooyinka USB, xirmaan qalabka iPhone iyo HTC si aad u computer. In yar ilbiriqsi, qalabka muujin doonaa faahfaahinta iyo image ee casriga ah, iyo qaybta kale ah, dhiggiisa. Hadda, go'aamiyo il iyo ujeedadoodu qalabka iyada oo button Flip. Marka xiran, aad suuqa kala ekaan karaa:
Fiiro gaar ah: The sumadaha aaladaha aad lagu soo bandhigi doonaa "Source" iyo "Destination" sida. The Source waa iPhone, halka caga dhigan yahay telefoonka HTC. Laakiin haddii aad jeceshahay inaad bedesho meelaha laba qalab aad, aad riix laga yaabaa in "Flip," taas oo button buluug ah. Marka ay ku xiran yihiin, loo hubiyo in ay ogaan your computer.
Sida aad ogtahay, macruufka nidaamyada hawlgalka iyo nidaamyada hawlgalka Android kala duwan yihiin iyo xogta aan la wadaagi karo oo ka mid ba midka kale of this laba qalab kala duwan. Tani waa sababta, halkii la isticmaalayo habka gacanta, waxaad karaa USB Wondershare MobileTrans in xogta ka iPhone ah wareejiyo phone Motorola ah.
Step3: Start nuqul xogta ka iPhone in aad telefoon Motorola
Ka dib markii aad doorato xogta ah in aad rabto in aad la wareejiyo, dhammaan xogta ama aad yar, waa in aad isticmaasho badhanka Start Copy. Waxaad awoodi doontaa in aad aragto warbixinta ka soo baxday ilaha iPhone in loo gudbin karaa si aad u socoto Motorola telefoonka.
Sida aad arki karto, ma jiro xog ah oo ku saabsan ilaha telefoonka. Xogtan ku qoran dhexe, sida sawiro, xiriirada, fariimaha, iyo iwm, ayaa loo gudbin karaa. Waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa si ay u xusaan xogta ka macruufka inuu u dhaqaaqo qalab HTC cusub. Marka calaamadeeyay, riix "Start Copy" button, ka dibna "Waxaa buuxiya" button marka la dhammeeyo guji.
MobileTrans Wareejin karaan Apps in ay yihiin kuwo la socon kara inta u dhaxaysa laba qalab, haddii aan qalab ay tahay caqli ku filan si loo joojiyo dhaqaaqdo leheyn. Iyadoo ku xiran xadka ama miisaan ah xijiyaan aad soo telefoonka cusub, kala iibsiga qaadan kartaa waqti ka mid ah. Waxay qaadan doontaa dhowr daqiiqo dhammayn marka aad ka iPhone wareejiyo fariimaha qoraalka ah in ka badan 12,000 in ay HTC, laakiin kumanaan sawiro, kala iibsiga qaadan lahaa dheer - laba saacadood.
Fiiro gaar ah: Inta lagu jiro hanaanka wareejinta, fadlan hubso in labada telefoonada si joogto ah ugu xiran si aad u computer sameeyo. Haddii kale, marnaba ma dhameysan doono. Haddii aad doorato in aad u faaruqiso phone caga hor wareejiyo, u tag sawir telefoonka Ahaado, oo la helo "data Clear hor nuqul" hoose ku yaal.
Waa kuwee HTC Device Ma isticmaashaa?
• HTC Mid ka mid ah X
• LTE HTC EVO 4G
• HTC Mid ka mid ah X +
• HTC Mid ka mid ah S
• Eye doonayay oo HTC
• HTC Mid ka mid ah M8 la Windows
• HTC Mid ka mid ah M8
> Resource > macruufka > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga macruufka Qalabka inay HTC Phones